Wheel drive izimoto -, ngaphezu kwakho konke, ukuthembela, induduzo ... anda petrol. Kuyinto, ukukhokhela konke, futhi izimo abanikazi off-road bephoqeleka ukuba ukhokhele ikhilomitha ngalinye. Ngakho ingabe ikhona yini imivuzo ke, ikakhulu uma ucabangela iqiniso lokuthi iningi izimoto nazo zonke-wheel drive ngandlela-thile isikhathi esiningi emigwaqeni yedolobha? Futhi into efanele okumelwe ngiyenze: ukulondoloza noma ukuba bazifake induduzo eyengeziwe? Kukhona inketho Lesisemkhatsini, sase isilinganiso, elinikeza zimoto ezine-wheel drive kanye aphansi petrol.
Coupe / Roadster ubekade sibonga simo ukuze wonke-wheel drive uhlelo "Audi Quattro". Amandla ezimbili litres turbo engine - 211 hp nokusheshisa emakhulwini ejwayelekile kuthatha imizuzwana mayelana 5.6. Ukusebenza kahle isihlobo (side kunaleso 10 amalitha / 100 km endaweni zasemadolobheni kanye 7.5 l / km 100 emgwaqeni omkhulu) kungenxa ukusetshenziswa egqinsiwe fuel injection uhlelo.
Model ifakwe injini 4 cylinder (2.5 L), kanye nophethiloli yayo ukusetshenziswa - 9.8 / 8 amalitha ejwayelekile 100 ikhilomitha ngalinye - Inkomba kuhle izimoto, Suv kokufaka isicelo sokuba yilungu. Ngaphezu kwalokho, idrayivu wonke-wheel (intengo "Outback" iqala ngo 40,000 USD) ingasebenza uphethiloli ngenqubo evamile octane, okuyinto futhi likuvumela ukusindisa ngezinga elithile.
I turbocharger "BMW" ezine-cylinder edonsa 240hp nokho petrol ngoba iwumbuso obunesizotha - 10.5 / 7.5 amalitha ngamunye km 100. Abaklami German ngempela baye bazama ukwenza okunjalo iyunithi amandla ukudluliswa 8-speed yabonisa kuqhathaniswa ukonga uphethiloli ukusetshenziswa, kodwa ungakhohlwa ukuthi sikhuluma ngokukhethekile mayelana nophethiloli lwezinga eliphakeme kakhulu. "BMW 528" - nomele zakudala esigabeni "wonke-wheel drive izimoto.
Ku-crossover yinqaba ingenye izinjini encane kunazo isilinganiso yethu (1.6 amalitha), nakuba ajwayelekile emakhulwini abahlakazekile kuyo amasekhondi angu-8. Izinkomba inzuzo (9.4 / 8) siyithola ngokuyinhloko ngokusebenzisa ukufakwa yokudlulisela "xtronic CVT Juke". Kwimodi elihlangene, imoto ibusa esingaphansi 9 amalitha.
Ngaphandle kweqiniso lokuthi kule crossover ingenye ethandwa kakhulu eklasini, liphinde ukonga. 3.5-litre engine ibusa i isilinganiso kungekho amalitha angaphezu kuka-8 100 ikhilomitha ngalinye. Ngiyavuma, i sibalo umxhwele imoto alesi sigaba. Isikhubekiso ukuthi ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusha hhayi kungaba ezishibhile, ngakho intengo umshini namanje ongafinyelela ayizinkulungwane 50 zamaRandi.
Enye omele eliqhakazile "wonke-wheel drive" isigaba. Hhayi imoto enamandla kakhulu (148 hp) kuhla lwethu, kodwa yezemidlalo ukusebenza yakhe neze ubani ngabe ukungabaze. Ngisho ne ohlelweni -wheel ukushayela imoto ukuze esingaphansi 9 amalitha uphethiloli ngaphansi kwedolobha futhi esingaphansi 7 amalitha ngenkathi ushayela emgwaqweni omkhulu.
Njengoba ubona, wonke-wheel izimoto drive kungaba ukonga. Enye into ukuthi cishe bonke of them, "brand", okusho ukuthi babe izindleko kuqhathaniswa eliphezulu okuzenzakalelayo.
"Toyota Cresta" - ibhizinisi-class sedan kusukela Japanese imoto giant
Nasopharynx. Isakhiwo nasopharynx. luhlolo endoscopic
Mink American: ukugcinwa kanye ukunakekelwa